मध्यरातमा एनआरएनए यूके कार्यसमिति र निर्वाचन समितिबीच सहमति, ६ ठाउंमा बुथ राखिने, १२ मा अधिवेशन, १३ मा निर्वाचन | We Nepali
मध्यरातमा एनआरएनए यूके कार्यसमिति र निर्वाचन समितिबीच सहमति, ६ ठाउंमा बुथ राखिने, १२ मा अधिवेशन, १३ मा निर्वाचन
२०७२ साउन १८ गते २:२०
लन्डन । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलकै झल्को दिने गरि गैर आवासीय नेपाली संघ, बेलायतको कार्यसमिति र निर्वाचन समिति २०१५ बीच मध्यरात विवादित विषयमा सहमति भएको छ । आइतबार ब्लु अर्किड रेष्टुरेन्टमा निर्वाचन समितिको अन्तरक्रिया समापनपछि लामो कसरतबीच मध्यरात २३ः४५ बजे सहमति भएको हो । अब निर्वाचन समितिले यसअघि जारी गरेको सूचना नै मान्य हुने सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार, अब १२ सेप्टेम्बरमा छैटौं राष्ट्रिय अधिवेशन र १३ सेप्टेम्बरमा कार्यसमिति निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । व्यापक दवावपछि इंग्ल्याण्डका ६ क्षेत्रमा निर्वाचन बुथ राख्ने सहमति समेत भएको छ । जसमा लन्डन प्लमस्टिड एक, अल्डरसट फार्नबोरो एक, लन्डन नर्थहोल्ट, ह्यारो एक, रेडिङ स्वीन्डन, अस्कोट, ब्रिस्टोल एक, आसफोर्ड, चेरिङटन एक र मिडल्याण्डमा एक बुथ राख्ने निर्णय भएको निर्वाचन समिति संयोजक डा. राघव प्रसाद धिताल (ओबिइ) ले जनाए । डा. धितालले निर्वाचन समितिको उद्देश्य कार्यसमितिसंग टक्कर वा हस्तक्षेप गर्ने नभइ निष्पक्ष, व्यवस्थित र सहज ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु समितिको प्राथमिकता रहेको प्रष्ट्याएका थिए ।
श्रोतका अनुसार, सदस्य सचिव रामशरण सिम्खडाले एनआरएनए यूके अध्यक्ष महेन्द्र कंडेललाई गोप्य स्थानमा लगेर सम्झाई बुझाई गरेपछि कंडेल सहमत भएका हुन् । सिम्खडाले संघको छवि सुधार्ने हो भने आसन्न निर्वाचन निष्पक्ष र व्यवस्थित गर्न निर्वाचन समितिले चाहे बमोजिम हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । कार्यसमितिले पटक पटक निर्वाचन र साधारणसभा मिति सार्दा बाहिर नकारात्मक सन्देश जान सक्नेबारे पनि सिम्खडाले सचेत गराएका थिए । निर्वाचन समितिको निर्देशिकालाई कार्यसमितिले कहिले बाझिने गरि उल्ट्याउने त कहिले निर्वाचन समितिलाई आलोचना गर्दै हिंड्ने परिस्थितिले केही असहज वातावरण बन्ने देखिएको थियो ।
गत शनिवार एनआरएनए यूके कार्यसमिति बैठकले निर्वाचन समितिको निर्णय बाझिने गरि जति पनि सदस्यता (खुबी हुनेले बोराका बोरा) बनाएर बुझाउन सक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अब निर्वाचन समितिको पूर्ववतः निर्णय बमोजिम एक व्यक्तिले बढिमा एकै घर परिवारको भएपनि दश सदस्यता फाराम भन्दा बढि पोष्ट गर्न नपाइने नियममा सहमति भएको छ । जतिपनि सदस्यता बुझाउन सक्ने नियमले अघिल्लो कार्यसमिति निर्वाचनका बेला व्यापक धांधली र पैसा हुनेले बोराका बोरा सदस्यता किनिदिएर संस्थामा विकृति भित्रिएको थियो । यसपटक भने पोष्टल भोटिङ खारेज गरिएको छ र सदस्यहरुले प्रत्यक्ष मतदान गर्नुपर्नेछ ।
सहमति बनेपछि एनआरएनए यूके अध्यक्ष कंडेलले संघको हितका लागि आफू वाधक नभएको बताउंदै विगतमा एकापसमा सहमतिबिना अघि बढ्दा दुर्घटना (संघभित्र विवाद) भएको बताएका थिए ।
यसअघि दिउसो भएको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष लगायत पदका प्रत्यासी, संरक्षक, सल्लाहकार, पदाधिकारी लगायत अन्यले निर्वाचन कसरी गर्दा बेस होला भन्नेबारे सुझाव सल्लाह दिएका थिए । अन्तरक्रियामा निर्वाचन समितिका तर्फबाट संयोजक डा. धिताल, सदस्य सचिव सिम्खडा र सदस्यहरु पूर्ण लक्सम, विश्व आदर्श पण्डित, शिवजी श्रेष्ठ, डा. चन्द्र लक्सम्बा सहभागी थिए ।